FANAPARITAHANA VOLA SANDOKA : Olona enina voasambotry ny polisy tao Moramanga
Tsy tery lalana ny ratsy. Misy hatrany ny mpanararaotra manoloana ny fivoahan’ireo vola taratasy vaovao. 29 août 2017
Ny zoma 25 aogositra tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva, dia nisy vehivavy roa nividy fahana teo amin’ny Hazo Midoroboka Moramanga. Fahana 1 000 Ariary iray no novidian’izy ireo tamin’ny vola 5 000 Ariary.
Rehefa nozahan’ilay mpivarotra fahana tsara anefa ilay vola, dia vola sandoka. Niantso polisy manao fandaminana fifamoivoizana tsy lavitra teo ny tenany. Mbola tsy lasa lavitra ireo vehivavy roa nitondra ilay vola sandoka no voasambotry ny polisy. Tafaverina tamin’ilay mpivarotra fahana kosa ny famerim-bolany 4 000 Ariary sy ilay fahana
1 000 Ariary. Nentina teny amin’ny biraon’ny polisy natao fanadihadiana kosa izy roa vavy. Natao ny fisavana ny paosy. Mbola nahitana vola sandoka 10 000 Ariary miisa 137 teny amin’izy ireo. Nandritra ny fanadihadiana natao, nanondro ireo namany ireto ramatoa anatina tambajotra mpanaparitaka vola sandoka ireto.
Nitontonan’ny polisy Moramanga tao Andasibe ny roa lahy. Mbola nahatratrarana vola sandoka 5 000 Ariary tany amin’ireto farany. Raha natao ny fitambarany, dia miisa 145 ny vola sandoka sarona ka ny 140 dia vola sandoka 10 000 Ariary raha 5 000 Ariary kosa ny 5. Araka ny fanazavana nentin’ny Kaomisera Divizionera Rakotoarivony Michael Hermann, lehiben’ny Kaomisaria ao Moramanga, dia miisa enina ireo olona voasambotra amin’ity raharaha vola sandoka tao Moramanga ity. Vehivavy ny roa amin’izy ireo.
Fantatra nandritra ny fanadihadiana natao fa tany Ambatolampy Antananarivo no nakana ireo vola sandoka nokasaina haparitaka tao Moramanga ireo.
Ny Kaomisera Divizionera Rakotoarivony Michael Hermann, izay nitondra fanazavana fa mampiasa fandokoana hoho na “vernis” ireo mpanao vola sandoka. Raha mijery tsara dia mora fantatra ireo vola sandoka sarona tao Moramanga ireo, raha ny fanazavany hatrany. Manify tsy mivoitra ny mari-bola amin’ilay sandoka ary mbola misy fofona “vernis”. Miantso ny rehetra mba ho malina ny tenany.
Ny angom-baovao hatrany no nahalalana fa amidy 2 500 Ariary vola tena izy ny vola sandoka 10 000 Ariary raha 1 500 Ariary kosa ny vola sandoka 5 000 Ariary.